Yakanakisa Kukunda Mirror Mosaic mataira Girazi Mosaic Girazi Dima uye Ichena Mosaic Tile Yekugezera Mugadziri uye Fekitori |VICTORY MOSAIC
Victory Mirror Mosaic tiles Girazi Mosaic Girazi Dima neWhite Mosaic Tile Bathroom
8mm gobvu girazi zvinhu, kusapisa uye kusapinda mvura.Yakanakira kicheni backsplashes.Tora yakomosaic backsplash mazanokuita chiito nekushandisa iyi mosaic.Iwo ane sirivha-akaputirwa kumusana uye anogona kushandiswa mukati memadziro ekugeza apo anozonyorova.
IzviGirazidecorative mataira akanyanya kunaka kune backsplashes uye mamwe emadziro maapplication.A akakwanamosaic mirror art.
Aya mataira anogadzirwa negirazi chairo, diamond-giredhi yakakwenenzverwa uye yakamisikidzwa simbi yakashongedzwa, hunza yako yekugezera nekicheni backsplashes mukuwirirana.A akakwanamosaic mirror wall decor.
Aya mataira egirazi akakwenenzverwa anoratidza chiedza zvinoyevedza, uye anokweretesa huchenjeri hwakajeka kune chero nzvimbo.Zvishandise kugadzira madziro anokatyamadza matauriro, backsplashes, shawa uye yekugezera yakatenderedza, uye zvimwe zvinhu kana chinhu chinoshamisa chinodiwa.
Pepa rega rega reiyo mosaic tile rinenge 1 sq ft papepa (12 x 12 inches).Akasimba, akasimba, asina kusvibiswa asina, iwo chete emhando yepamusoro mataira anosarudzwa sezvo matairi edu anoongororwa mavanga asati atumirwa.
Iyi backsplash tile yakagadzirwa nekristaro girazi uye aluminium simbi, yakagadzirwa semashiripiti mapatani.Kuseri kwechigadzirwa chedu, yakasungirirwa mesh saka zviri nyore kucheka.
It ndeyemhando yepamusoro 8mmukobvugirazi rekutanga uye simbi yealuminium, uye inofanira kuiswa uchishandisa grout (inokurudzirwa grout: 1/16 inches).
Square Glass Mirror Tile haschitarisiko chekare uye gadzira fungidziro yenzvimbo yakakura mune chero mhando yemukati yaunosarudza.
Iyi series ine 5mosaic code, mumativi mana.100% girazi rakachena.Izvisquare mosaic tilesukobvu 8mm.Mesh yakaiswa.Bhokisi rimwe chete mashizha gumi nerimwe.Tinogona kutengesa mumapallet neimwe pallet 36 bhokisi, 45 bhokisi, 54 bhokisi, 63 bhokisi kana 72 bhokisi kana 81 bhokisi.
Ichi chinhu isu tinotengesa zvakanaka muUnited States, Canada, Mexico, Australia, United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, Poland, Russia,Mubatanidzwa Arabhu Emeretsi, Vietnam, Thailand, Indonesia etc. kusvika zvino.
Model Number VA6D01, VA6D02, VA6D03, VA6D04, VA6D05
Chipi saizi (mm) 23*23+48*48+23*48+23*73+73*73
Color White, dema, goridhe, beige
Shape Sikweya, Rectangular
Zvakapfuura: China Victory Laminated Glass Mosaic Tiles Metallic Mosaic Bathroom Tile 12 x 12 Mosaic Tile
Zvinotevera: Foshan Kukunda Mosaic Triangle Metal Mosaic Aluminium Mosaic
china mirror mosaic tiles
inopisa kutengesa girazi mosaic mataira
girazi mosaic mataira fekitori
girazi mosaic tiles mugadziri
girazi mosaic tiles mutengesi
5mm Hukobvu Girazi/Rima Grey/Brown Silver Mirro...
Antique Grid Pateni Square Laminated girazi Ele...
Hexagon Mosaic Tile Girazi Mosaic Tile Backsplas...